Beauty Device Consumables Factory |China Beauty Device Consumables Abavelisi kunye nababoneleli
I-Oxygen Facial inikezela ngokuvuselelwa kwesikhumba okungalawulwanga ngokudibanisa unyango oluthathu kubuso obuphezulu.Ukusebenzisa itekhnoloji ephucukileyo, obu bubuso bu-3-in-1 bukhupha, bondla, kwaye buhambisa i-oxygen eluswini ukunyusa ukuhamba kwegazi, ukuvelisa i-collagen, kunye nokukhawulezisa ukuvuselelwa kweeseli.Isiphumo sivuselelwe ngokukhazimlayo, sisempilweni, ulusu olukhangeleka luncinci.Ubuso beoksijini abucaphukisi kwaye bukhuselekile kuzo zonke iintlobo zesikhumba.Ngaphezu koko, unyango alunantlungu, lunokugqityezelwa kwimizuzu engama-30, kwaye akukho xesha lokuphumla.Okona kulungileyo, iziphumo zinokubonwa emva konyango olunye.
Carbon Gel for Nd yag laser carbon ukuxobula hollywood amaxolo unyango
(1) Umgubo wekhabhoni njengebala elenziwe langaphandle unamandla okuthengisa, unokufunxa ubumdaka obunzulu kwipore kwaye unempembelelo ye-antiphlogistic kwi-acne skin bacillus.
(2) Umgubo weCarbon kwilaser uneempawu ezibalaseleyo zokubhengeza
(3) Ukulimala kweselula kwakugcinwe kwi-carbon powder kufuphi nezicubu ezikufutshane, kwaye phantse akukho mpembelelo kwizicubu ezingajoliswanga.
(4) Faka i-nano carbon powder ebusweni, mayingene kwiipores, i-laser iphule ibe ngamaqhekeza.ukutyumza ubumdaka kunye ne-epidermis cutin: ivelisa ukuhanjiswa kwamandla aphezulu kwidermis, ivuselela ngokupheleleyo uhlaziyo lweseli yolusu kunye namandla, ivuselela i-collagen fiber kunye nokulungiswa kwefayibha ezilastiki, kusetyenziswa umsebenzi wokulungisa ulusu lwendalo, sungula i-collagen entsha ngocwangco kunye nolungelelwaniso, ngaloo ndlela ukuqonda ukususa imibimbi, ukushwabana. i-pore, ulusu olugudileyo, yenza ulusu lubuyisele ukunwebeka kwasekuqaleni.
Isisombululo se-Aqua ebusweni serum yonyango lwe-hydrate yolusu
I-exfoliants ecocekileyo, epholileyo kwaye ayicaphukisi, i-soft exfoliation, ayidibanisi, yenza ukuchithwa kwe-keratinocytes, ukufuma okungapheliyo.
Ithambisa kwaye yondle ulusu, iphucula ukukhuseleka kolusu, inqanda i-melanin, izondlo zevithamin C zinikezela eluswini, zibuyisela
iiseli ezonakeleyo, inceda ukuvuselelwa.
Ukukhupha i-acne, ithambile kwaye ayicaphuki, amandla okucoca anamandla,
uphondo oluthambileyo, lukhulula amaqhakuva, irhashalala kunye nezinye iingxaki, luthambisa ngokufanelekileyo kwaye luthomalalise ulusu
Korea Aquafacial isisombululo serum ezithengiswayo
yamva nje kwitekhnoloji ye-skincare.IHydradermabrasion isebenzisa amandla okuphilisa endalo amanzi kunye neoksijini ukukhupha ulusu ngaphandle kokusetyenziswa kweekristale eziqinileyo okanye iindonga ezirhabaxayo, ezivelisa ulusu olumanzi kwaye lubukeka lusempilweni.
Antifreeze pads inwebu kunyango Cryolipolysis amafutha umkhenkce
1.Ukupholisa imilo cryolipolysis antifreeze membran
2.Cryotherapy antifreeze ukukhusela ulusu
4.Ubuhle be-SPA / SALON / CLINIC / CENTRE / AESTHETIC ukusetyenziswa
Coolplas Antifreeze gelpads inwebu kunyango Cryolipolysis amafutha umkhenkce
Iisayizi ezi-3 zegelpad epholileyo: 25 * 40cm 25 * 50cm 25 * 60cm
I-gel yokukhusela i-pad ye-cotton sheet efakwe kwisisombululo se-liquid kwaye isetyenziswe njenge-thermal coupling ukukhusela indawo ekujoliswe kuyo ngexesha lonyango.Ayinakuphinda isetyenziswe.
Ijelpad ekhethekileyo epholileyo eyenzelwe izixhobo ze-coolpalas, esebenzayo kwiimpatho ezahlukeneyo zonyango.
I-membrane echasene nomkhenkce eyenziwe ngokwezifiso yeCOOLPLAS Cryolipolysis umatshini ovela eSincoheren.Kwakhona kufanelekile kuwo wonke umatshini we-cryoliplysis.
Ubungakanani obu-3 bulungele iindawo ezahlukeneyo zonyango.
BB UKUKHANYA ISerum yokusetyenziswa kosiba lweMicroneedle
1, Ingasetyenziswa ngokuthe ngqo ngaphandle kokusebenzisa Dr.Pen (microneedling meso derma pen).Indibaniselwano yesiseko solwelo kunye ne-essence ingcono.
2, I Dr.Pen (microneedling meso derma pen) ukusebenza kunye nenkqubo yokusebenzisa
(1): ukucocwa: ukucocwa kobuso bobuso ukuze kufumaneke imeko ecocekileyo nentsha
(2): i-compress eshushu: i-compress eshushu ye-5-10 imizuzu, injongo kukuvula ulusu kunye neenwele zeenwele.
(4): Ukulahla isiseko sesiseko solwelo esikhumbeni, ngokwemeko yesikhumba somthengi, i-nano-microneedles yombane ihlengahlengiswa ngokuqhelekileyo kwi-0.5-1.0 yokusebenza, kwaye ilungelelaniswe ngokuhambelana nondwendwe.30-50 imizuzu
(5): Emva kotyando, ubuso busenokubonakala bubomvu, nto leyo eyahluka kumntu nomntu.Yinto eqhelekileyo emva kwe-microneedles.Unokusebenzisa ijeli yokulungisa ukuthomalalisa ukusebenzisa ubuso bonke okanye imaski yokulungisa inzala ebandayo.
(6): Musa ukuchukumisa amanzi kwiiyure ezingama-6-8 emva kokugqiba isiseko se-makeup.Kwiintsuku ezi-3 zokuqala, musa ukuchukumisa i-spicy kunye nokutya kwaselwandle.Zama ukuba ungafaki izimonyo ezinzima kwiintsuku ezi-3 zokuqala.
(7): Ikhefu phakathi kokusebenza limalunga neentsuku ezili-10.Ixesha lesondlo liyahluka kumntu nomntu.Ngokuqhelekileyo, igcinwa malunga neentsuku ezi-8-15.Ngalo lonke ixesha ulusu lukhanya kwaye lumhlophe, amaxesha amaninzi enziwayo, ixesha elide lokugcinwa.